देशको राजनीति नै तरंगित हुनेगरी जनार्दन शर्माले सर्वाजनिक रुपमै उठाए यस्तो मुद्धा, अब के होला ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
देशको राजनीति नै तरंगित हुनेगरी जनार्दन शर्माले सर्वाजनिक रुपमै उठाए यस्तो मुद्धा, अब के होला ?
देशको राजनीति नै तरंगित हुनेगरी जनार्दन शर्माले सर्वाजनिक रुपमै नयाँ मुद्धा उठान गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र का संगठन विभाग प्रमुख तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टीको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) लाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।
वाईसीएलको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै शर्माले विगतमा पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दालाई बोकेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । कार्यकारी प्रमुखको कुरा, समानुपातिक निर्वाचन, पहिचान र विशेष अधिकारका मुद्दा बाँकी छन् । ती मुद्दाहरूलाई समातेर अगाडि बढ्नुस् उनले भने ।
वाईसीएल मुद्दा विहीन बनेमा जीवन्त नहुने शर्माको भनाइ थियो । उनले विगतमा पार्टीले उठाउँदै आएका र पूरा हुन नसकेका मुद्दालाई फेरि उठाउनुपर्ने बताए ।